ဗီဇဆိုတာ သေမှ ပျောက်တတ်တာမျိုးပါ – Shinyoon
လူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ် ဘယ်လောက်ပဲ တွယ်တာတွယ်တာ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါတိုင်း ခွင့်လွှတ်ရအောင် အမှားတိုင်းဟာ ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလေ ။
ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ အပွင့်လင်းဆုံး၀န်ခံရရင် မစွန့်လွှတ်နိုင်ခဲ့သေးလို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်တာပါ အမှားတွေကို သိနေပြီပဲလေ အမှန်တော့ ပြင်လာမှာပါဆိုတဲ့ စိတ်တစ်ခုနဲ့ ကျွန်မ ခွင့်လွှတ်တတ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်က အမှားတစ်ခုခုကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်နေပြီဆိုရင် သူမင်းကို မစာနာတော့ဘူးဆိုတာ ရင်နာနာနဲ့ လက်ခံရတော့မယ် တဲ့ ဟုတ်ပါတယ် ပထမတစ်ခါ ပြင်လာမလားဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ် ဒုတိယတစ်ခါ အမှန်မြင်လာမှာပါဆိုတဲ့အသိနဲ့ အခွင့်အရေးပေးခဲ့မိတယ် လူတိုင်းမှာ အခွင့်အရေးတော့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါ ပေးဖို့သင့်ကောင်းပါရဲ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ပေးခဲ့မိတာပါ ။ မထူးတဲ့ ဇာတ်မှာ မထူးတဲ့ အမှားတွေနဲ့သာ ဆက်ပြီး နှစ်ပါးသွားရတယ်
အမှားတိုင်းက ခွင့်လွှတ်မှုနဲ့ မထိုက်တန်ဘူးလေ ။ ကျွန်မလဲ ပုထုဇဥ်ပါ ဗီဇကို ပြင်ရလောက်တဲ့အထိ မစွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူး အရင်က အကျင့်ဆိုးတွေထင်လို့ အပင်ပန်းခံပြီး ပြင်ကြည့်ခဲ့မိတာလေ နောက်မှ တဖြေးဖြေး ဗီဇမှန်း ရိပ်မိလာခဲ့တာပါ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဇဟာ သေမှာပျောက်တယ်တဲ့ ဖုံးကွယ်လို့ရခဲ့ရင်တောင် အချိန်ခဏလေးပဲ ပြီးရင် ပြန်ပြီးပေါ်လာတာပဲလေ
ဆက်ပြီး ခွင့်လွှတ်နေဖို့ထက် စွန့်လွှတ်ဖို့ကိုပဲ ကျွန်မ ရွေးခဲ့မိတယ် ဆက်ပြီး မနာကျင်ချင်တော့ဘူးလေ ။ ကျွန်မကို ချစ်ရင် ပြင်လာမှာပါ ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အချိန်တွေ အများကြီး ဖြုန်းခဲ့မိတယ် တကယ်ချစ်ရင်တော့ ပြင်လာမှာပါလေ တကယ်မချစ်ခဲ့လို့ပဲ နေမှာပါ နောက်တစ်ခါဆို ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အမှားကို အရင်ကြည့်ပြီးမှ ခွင့်လွှတ်ပါဆိုတဲ့ စကားပြောတတ်ပါစေ ။ ဘယ်လောက်ပဲ ခွင့်လွှတ်တတ် သည်းခံတတ်ပါစေ အမှားတိုင်းကို ရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ လွယ်လွယ်လေး သည်းခံခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ဖို့အထိ ဘယ်သူမှာမှ ပါရမီ မပါလာကြဘူး
နာကျင်တတ်တယ် ပြီးတော့ နာကျည်းတတ်တယ် . . . ဆက်ပြီးခွင့်လွှတ်နေလဲ ဆက်ပြီး နာကျင်နေမယ့်အတူတူ အမှားတွေကို မျက်ကွယ်ပြုဖို့ စွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့နည်းကပဲ ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ပဲ ပြောင်းလဲ ပေးချင်ချင် ပြောင်းလဲချင်စိတ်ရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်မှ ပြောင်းလဲလာတတ်တာလေ သိပ်ပြီးအပင်ပန်းမခံပါနဲ့ ဗီဇဆိုတာ သေမှ ပျောက်တတ်တာမျိုးပါ ။
လူတစ္ေယာက္ကို ဘယ္ေလာက္ပဲခ်စ္ခ်စ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ တြယ္တာတြယ္တာ ခြင့္လႊတ္ပါလို႔ေျပာတဲ့အခါတိုင္း ခြင့္လႊတ္ရေအာင္ အမွားတိုင္းဟာ ခြင့္လႊတ္မႈနဲ႔ မထိုက္တန္ဘူးေလ ။
ခြင့္လႊတ္လိုက္တယ္ဆိုတာ အပြင့္လင္းဆုံး၀န္ခံရရင္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ခဲ့ေသးလို႔ ခြင့္လႊတ္လိုက္တာပါ အမွားေတြကို သိေနၿပီပဲေလ အမွန္ေတာ့ ျပင္လာမွာပါဆိုတဲ့ စိတ္တစ္ခုနဲ႔ ကြၽန္မ ခြင့္လႊတ္တတ္ပါတယ္
ဒါေပမယ့္ လူတစ္ေယာက္က အမွားတစ္ခုခုကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျပဳလုပ္ေနၿပီဆိုရင္ သူမင္းကို မစာနာေတာ့ဘူးဆိုတာ ရင္နာနာနဲ႔ လက္ခံရေတာ့မယ္ တဲ့ ဟုတ္ပါတယ္ ပထမတစ္ခါ ျပင္လာမလားဆိုတဲ့ အသိနဲ႔ ခြင့္လႊတ္ခဲ့တယ္ ဒုတိယတစ္ခါ အမွန္ျမင္လာမွာပါဆိုတဲ့အသိနဲ႔ အခြင့္အေရးေပးခဲ့မိတယ္ လူတိုင္းမွာ အခြင့္အေရးေတာ့ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ေပးဖို႔သင့္ေကာင္းပါရဲ႕ဆိုတဲ့အေတြးနဲ႔ ေပးခဲ့မိတာပါ ။ မထူးတဲ့ ဇာတ္မွာ မထူးတဲ့ အမွားေတြနဲ႔သာ ဆက္ၿပီး ႏွစ္ပါးသြားရတယ္
အမွားတိုင္းက ခြင့္လႊတ္မႈနဲ႔ မထိုက္တန္ဘူးေလ ။ ကြၽန္မလဲ ပုထုဇဥ္ပါ ဗီဇကို ျပင္ရေလာက္တဲ့အထိ မစြမ္းႏိုင္ခဲ့ဘူး အရင္က အက်င့္ဆိုးေတြထင္လို႔ အပင္ပန္းခံၿပီး ျပင္ၾကည့္ခဲ့မိတာေလ ေနာက္မွ တေျဖးေျဖး ဗီဇမွန္း ရိပ္မိလာခဲ့တာပါ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဗီဇဟာ ေသမွာေပ်ာက္တယ္တဲ့ ဖုံးကြယ္လို႔ရခဲ့ရင္ေတာင္ အခ်ိန္ခဏေလးပဲ ၿပီးရင္ ျပန္ၿပီးေပၚလာတာပဲေလ
ဆက္ၿပီး ခြင့္လႊတ္ေနဖို႔ထက္ စြန္႔လႊတ္ဖို႔ကိုပဲ ကြၽန္မ ေ႐ြးခဲ့မိတယ္ ဆက္ၿပီး မနာက်င္ခ်င္ေတာ့ဘူးေလ ။ ကြၽန္မကို ခ်စ္ရင္ ျပင္လာမွာပါ ဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားႀကီး ျဖဳန္းခဲ့မိတယ္ တကယ္ခ်စ္ရင္ေတာ့ ျပင္လာမွာပါေလ တကယ္မခ်စ္ခဲ့လို႔ပဲ ေနမွာပါ ေနာက္တစ္ခါဆို ကိုယ္လုပ္ခဲ့တဲ့အမွားကို အရင္ၾကည့္ၿပီးမွ ခြင့္လႊတ္ပါဆိုတဲ့ စကားေျပာတတ္ပါေစ ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ခြင့္လႊတ္တတ္ သည္းခံတတ္ပါေစ အမွားတိုင္းကို ရပါတယ္ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ လြယ္လြယ္ေလး သည္းခံခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္ဖို႔အထိ ဘယ္သူမွာမွ ပါရမီ မပါလာၾကဘူး
နာက်င္တတ္တယ္ ၿပီးေတာ့ နာက်ည္းတတ္တယ္ . . . ဆက္ၿပီးခြင့္လႊတ္ေနလဲ ဆက္ၿပီး နာက်င္ေနမယ့္အတူတူ အမွားေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳဖို႔ စြန္႔လႊတ္လိုက္တဲ့နည္းကပဲ ပိုေကာင္းမယ္လို႔ထင္ပါတယ္ လူတစ္ေယာက္ကို ကိုယ့္ဘက္က ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းလဲ ေပးခ်င္ခ်င္ ေျပာင္းလဲခ်င္စိတ္ရွိတဲ့ လူတစ္ေယာက္မွ ေျပာင္းလဲလာတတ္တာေလ သိပ္ၿပီးအပင္ပန္းမခံပါနဲ႔ ဗီဇဆိုတာ ေသမွ ေပ်ာက္တတ္တာမ်ိဳးပါ ။
ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအတွက်မှ မဟုတ်ရင် ဘယ်အချစ်ကိုမှ မမက်နဲ့
ဘယ်သူကများ လောကကြီးကို တစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းချင်ပါ့မလဲ